Bichar Khabar » विचार
शिक्षाको संरचना भएको परिवर्तनले निजी शिक्षण संस्थालाई कस्तो असर परेको छ ? अहिले शिक्षा भनेको एउटा ठाउँ विशेष भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि राज्यले नै त्यही अनुसारकै नीति नियमको पालना गराउनुपर्ने अवस्था आएको छ । हाम्रा विद्यार्थीहरु अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारबजारमा विक्रि हुने किसिमको बनाउनु पर्ने आवश्यकता भएको छ । अहिले स्थानियतहका विद्यालयमा […]
नेपालमा शिक्षा पत्रकारिता :विकासक्रम र बर्तमान अवस्था
शिक्षाको पुरानो शैलीका कारण विश्वव्यापी रुपमा प्रभाव पार्ने शैक्षिक सामाग्रीहरुलाई मिडियाले शसक्त रुपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सेकेका थिएनन् । १९५८ देखि प्रकाशनमा आएको नेपालको जेठो समाचार पत्र गोरखापत्रले शैक्षिक समाचारलाई समावेश गर्दे शैक्षिक जमतमा योगदान पु¥याएको छ । भारतबाट शैक्षिक पत्रकारिताको रुपमा सुनकेशरी प्रधानको सम्पादन र प्रकाशनमा हिमाल किशोर २००७ प्रकाशित भएको पाइन्छ । […]
दलित सांसदलाई राजधानीमै पनि कोठा दिदैनन् घरवेटी – सांसद आसा विक
सांसद आसा विकले दलितलाई थर परिवर्तन गर्दा सहज हुने बताएकी छिन् । उनले दलितले राजधानीमै पनि आफ्नो थर भन्दा असहज हुने बताइन् । नागरिकता विधेयकमाथि संशोधन गर्दागर्दै थर फेरेर नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएकी थिइन्। उनले एक सञ्चारमाध्यम संग कुरा गर्दै यस्तो बताएकी हुन् ।’ म बिक हुँ भने बाहुनको थर राखेर नागरिकता पाउनुपर्छ भनेको […]
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले २०३० सम्म नेपालका सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गरिने बताएका छन् । स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै राज्यमन्त्री यादवले २०३० सम्म सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गरिने बताएका हुन् । राज्यमन्त्री यादवका अनुसार स्थानीय तहमा ४५३ वटा स्थानीय तह चिकित्सकविहीन छन् । त्यहाँ डाक्टर पठाउने प्रस्ताव […]
यतिवेला जापानमा काम गर्न जान पाइने अासमा कयाै नेपाली युवाहरू जापनिज भाषा अध्ययन गिररहेका छन् । अाजैमात्र सम्पन्न जापनिज भाषा परिक्षा न्याट टेष्टमा पनि विद्यार्थीकाे उल्लेख्य उपस्थिति रहेकाे थियाे । कामकाे खाेजीमा जापानमा अध्ययनका लागि हजाराैँकाे संख्यामा प्रत्यक बर्ष नेपाली युवाहरू विदेशिने गरेका छन् भने अब कामकै लागि सरकारी स्तरबाटै लाने भएपछी अाम नागिरककाे चासाे […]
फेब्रुअरी १४ अर्थात प्रेम दिवस । प्रेमील जोडीहरु गुलाब चुँडेर हृदय जोड्छन् । सर्सर्ती हेर्दा प्रणय दिवस जोडीहरुबीच प्रेम प्रकटीकरण गर्ने दिनका रुपमा हेरिन्छ । तर सुक्ष्म र कुसाग्र अध्ययनले अस्तित्वले समाजलाई महान गन्तव्यतर्फ डोर्याएको देखिन्छ । प्रणय दिवस समाजको बहुप्रेमतर्फको यात्रा हो । ओशो भन्छन्, ‘बहुप्रेम’ मनुष्यको जन्मजात लक्षण हो । सामाजिक व्यवस्थाले जतिसुकै […]
विद्यालय र विद्यार्थी जहिल्यै पनि हतियारको रुपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । पटक–पटक हुँदै आएको विद्यालय बन्दको राजनीतिले देशकै शिक्षा क्षेत्रलाई थिलथिलो बनाइसकेपनि यो प्रकिया रोकिएको छैन । विद्यालय क्षेत्र संवेदनशिल क्षेत्र भए पनि राजनीतिक दल वा अन्य आन्दोलनको त्रास यस क्षेत्रमाथि कतिसम्म गहिरो र व्यापक छ भने सानोतिनो बन्दको हल्लाकै भरमा पनि एकै पटक […]
संघीय संरचनाको छोटो अभ्यासले देखाएको तथ्य हो– केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाताकाको सहरी विकास अब न स्वीकार गर्न सकिन्छ, नत त्यो आफैमा टिक्न सक्छ । विगतमा एकात्मक राज्य व्यवस्थाको हृदयस्थली काठमाडौंले अन्य भूभागलाई आफूप्रति निर्भर बनायो । त्यही गोरेटो समाउँदै अबको प्रादेशिक राजधानीले आफैमा केन्द्रीकृत प्रदेशको वैभव समेट्न खोजे भने तिनले पक्षाघात व्यहोर्छन् ।सहरलाई सुनौं हामीले ‘सहर’ त्यस्तो बसोबास क्षेत्रलाई […]
घुमफिर कत्तिको गर्नुहुन्छ ?पहिला असाध्यै घुमफिर गर्थें । धेरै ठाउँ पुगियो । तर, अहिले व्यस्तताले कम भएको छ । पहिला वर्षमा दुई महिनाजति घुम्थेँ । अहिले वर्षमा बढीमा १५ दिनजति घुम्छु होला । म घुमफिर गर्न रुचाउने मान्छे हुँ । साथीभाइ र परिवारसँग घुमफिर गर्दा रमाइलो हुन्छ । फ्रेस भइन्छ । दुःख–पीडा बिर्सिइन्छ । नेपालको […]